Ekhaya > Iimveliso > Imatrasi yasentwasahlobo > Imatrasi eqhubekayo yasentwasahlobo
Ongatshatanga, uKing ongatshatanga, Opheleleyo, uKumkanikazi, uKumkani
Ukusetyenziswa kwesiqhelo iminyaka eli-15
I-15,000 ii-pcs ngenyanga
ISPA, i-SGS, i-CRF1633, i-BS7177
Iflethi icinezelwe + ipallet / Iqengqele ibhokisi / ibhegi
Iintsuku ezili-15 zokusebenza kokwenza isampulu, iintsuku ezingama-30 zokusebenza kwimveliso yobuninzi
Imemori Foam Iindawo ezi-5 zoomatrasi baseNtwasahlobo zenziwe ngentwasahlobo epokothweni, kunye ne-5 Zone high density foam.
Ukunethezeka, ubuhle, uyilo lwangoku.
Nawuphi na ubungakanani kunye nomzekelo ungenziwa ngemfuneko.
1.XHASA ISIQILI SAKHO
Singenisa i-latex yendalo yendalo njengoluhlu lwentuthuzelo. Iyahambelana ngamandla nomzimba wakho. Ixhasa ukulungelelaniswa kwendalo komqolo.
2. UKULALA PHOLILE
Isiseko seziko sigqityiwe nge-foam yokuxinana kwememori, kupholile kwaye kuthe cwaka. Imemori yegwebu kwimvakalelo yokushisa kobushushu bomzimba, ngokuthe ngcembe ithambe, ngelixa ifunxa uxinzelelo lomzimba ukulungelelanisa umzimba kwindawo efanelekileyo.
Sisebenzisa ugwebu oluphezulu njengesiseko samandla kunye nokomelela. Yinto ephambili yokudibanisa kunye noxinzelelo olukhulu lokugqibela kunye nentuthuzelo engenakuthelekiswa nanto.
4.ZERO IQabane UKUPHAZAMISEKA
Umntu oqhelekileyo utshintsha indawo zokulala.
5.KULUNGELELA IINTLUNGU ZOMZIMBA
I-Rayson umatrasi uxhasa umatrasi onzima ogqibeleleyo, ophelisa kakhulu iintlungu zomzimba wakho.
ISIQINISEKISO SE-SPRING SEMINYAKA EMI-6.15
Umatrasi waserayson wasentwasahlobo, owenziwe ngentwasahlobo esulungekileyo, isiqinisekiso seminyaka eli-15 sempilo yasentwasahlobo.
Rayson okanye i-OEM
Ithambile / iphakathi / inzima
Ongatshatanga, amawele, opheleleyo, ukumkanikazi, ukumkani kwaye ulungelelanise
Ilaphu elukiweyo / ilaphu leJacquad / ilaphu leTricot | Abanye
30cm okanye wena
Ihotele / Ikhaya / indlu / isikolo / Undwendwe
Isampula iintsuku ezili-15, ukuze Mass iintsuku 25-30
T / T, L / C, i-Western Union, i-Paypal
Ilaphu elaphukileyo, ubutofotofo kwaye bonwabile
1000 # ipholiyesta
2cm ukuphakama kwenkumbulo egobileyo
2cm amagwebu anzima
3cm ugwebu oluphezulu
2cm amagwebu athambileyo
I-22cm yeendawo ezi-5 Zendawo yasentwasahlobo ngesakhelo
1cm igwebu ethambileyo
Ilaphu elinithiweyo, libutofotofo kwaye likhululekile
Intwasahlobo ihotele m Ukujonga ubukhulu
Layisha / 40 HQ (iiPC)
I-XL engatshatanga (i-Twin XL)
I-XL (XL epheleleyo)
Ngama-76 * 80
Ngo-193 * 203
Ubungakanani bungenziwa ngentando!
Into ebalulekileyo ekufuneka ndiyithethile:
1.Mhlawumbi yahluke kancinci kuleyo uyifunayo. Ngapha koko, ezinye iiparameter ezinje ngepateni, ulwakhiwo, ubude kunye nobukhulu zinokwenziwa ngokwezifiso
2.Mhlawumbi uyabhideka malunga nokuba ngowuphi umandlalo wentwasahlobo othengiswa kakhulu. Ewe, enkosi kwiminyaka eli-10 yamava, siza kukunika iingcebiso zobungcali.
Ixabiso lethu eliphambili kukunceda wenze inzuzo engaphezulu.
4. Siyavuya ukwabelana ngolwazi lwethu nawe, thetha nje nathi.
Ilaphu leRayson, igophe loyilo lwala maxesha, ngakumbi ilaphu elikhethiweyo, elinokuphefumla, elinobuhlobo ngakumbi kwaye lihlala ixesha elide. Ilaphu eliphakathi lisebenzisa umbala omnyama kunokuba lula ukwahlula umatrasi weendawo ezi-3, ulingana ngokugqibeleleyo nalo matrasi.
Uyilo oluphezulu lomqamelo
Uyilo lomqamelo oluphezulu lomqamelo, lwahlukile kwincindi eqhelekileyo kunye naseYurophu ephezulu. Yenza abantu bajonge phezulu kakhulu, iikona ezigobileyo ezintle, ubunewunewu kunye nefashoni.
Ilaphu elicwangcisiweyo loyilo lwe-3D
Amacala amathathu ajikelezileyo athungwe kakuhle, imigca icocekile kwaye intekenteke, kwaye amalaphu esecaleni athambile kwaye ayaphefumla.